Mgbanwe nke telivishọn na ịntanetị | Martech Zone
Mgbanwe nke telivishọn na Intanet
Na Tọzdee, Septemba 6, 2011 Wednesday, October 26, 2011 Douglas Karr
Agbanyeghị na GoogleTV na AppleTV nwere mmekọrịta dị mma, ọ dị ka sistemụ ndị a bụ web kachasị kachasị maka ikiri telivishọn. Anyị na-ahụ ọganihu na teknụzụ - lee LG Pentouch anya (nke a bụ mgbasa ozi). Ọ bụrụ na m hụrụ 60 ″ LG Pentouch Plasma tupu ịzụta ụlọ ọrụ anyị LCD TV:
Ewezuga ịgbanwe ụzọ anyị si eji nnukwu ngebichi na-arụ ọrụ, ọ na-emekwa ka m juo anya otu ndị mgbasa ozi nwere ike isi na-emekọrịta ihe n'ụlọ. Ọ bụ naanị oge tupu m kwenyere na anyị ga-ahụ ọkwa na-arụsi ọrụ ike na ihe ngosi na mgbasa ozi iji kwe ka mmekọrịta the ọbụlagodi ịkpọ na ịtụ ahịa kpọmkwem site na azụmahịa!
Ndị ọrụ nwere ike ịgbalite ọnọdụ Pentouch site na iji ọpịpị na ntanetị. Na ọnọdụ Pentouch, ndị ọrụ nwere ike ịnweta faịlụ (dị ka PowerPoints) na ọdịnaya ọ bụla sitere na PC ha, wee rụọ ọrụ na ha, dezie ha ma ọ bụ bugharịa ha gburugburu ihuenyo ahụ nwere nnukwu nsogbu. TV na-akwado iji ojiji mkpị mkpị n'otu oge, na batrị pen nwere ike ịbeghachi site na ọdụ ụgbọ USB na azụ nke igwe TV.
Iji TV nke ụlọ nke software, ọrụ nwere ike ise foto ozugbo na ihuenyo na mgbe ịzọpụta faịlụ maka inwekwu edezi ma ọ bụ mmetụta mkpachapụ. Ọ bụrụ na PC ejikọrọ na onye nbipute, ndị ọrụ nwere ike ibipụta ha Pentouch kere, kwa. Ihe ngwanrọ dị mgbagwoju anya gụnyere Gallery, nke na-abịa na njirimara ngosi slide, Family Calendar na Digital Photo Frame, nke na-enye ndị ọrụ ohere ịchọ ọrụ ha mma na etiti nke nhọrọ ha. A na-ejikọkwa Pentouch TV na ịntanetị, na-enye ohere ka ebudata ngwa ndị ọzọ ka ịchọrọ.
Pentouch TV na-eji onyogho na-enweghị iko iko, yana okwu RGB na kachasị mma maka onyogho. A na-enwekwu nkasi obi ọhụụ site na ọrụ njikwa njigide akpaaka na teknụzụ na-acha agba. Na itule na unit nkecha TruSlim Frame design, Pentouch TV na-eji nguzo edepụtara nke ọma iji hụ na TV anaghị ada mbà mgbe ndị nwe ha na-eji atụmatụ Pentouch.
Ebumnuche 8 Mere ndị ọbịa ji hapụ saịtị gị
Mmebe nke Facebook Fan